Muslim soldiers in Ava King’s Army ငဇင်ကာ ခေါ် ဒီဘရစ်တိုကို တိုက်တုန်းက မွတ်စ်လင် စစ်သည်တွေလည်းပါခဲ့သကိုး | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« နာမည်ဆိုး ရင် ဆိုးပါစေ ။ အမျိုးသားရေး အတွက် လုပ်စရာ ရှိတာလုပ်ရမှာပဲ သမ္မတ ဂျီး… ရခိုင် နဲ့ ၉၆၉ တို့ ရဲ့ သဘောထား မှားယွင်း ယုတ်ညံ့ မှုကို ဒီ comment က ကိုယ်စားပြုပါတယ်
Pyu Indian Kalars are one of the original races of Bama »
Tags: Catholic Church, Christianity, Denominations, Jahangir, Jesuit, Portuguese language, Religion and Spirituality, Society of Jesus
This entry was posted on October 6, 2013 at 12:23 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.